Synthenox-Carnosin Oxide Complex: Iyi yakaoma inobvumira mushandisi kuti awanezve nokukurumidza mushure mekushanda zvakaoma. Izvo zvakaoma zvinokurudzirawo musisi maitiro ekugadzirisa. Iyi yakaoma inosanganisira zvinhu zvakasiyana-siyana zvakadai se: Beta Alanine, L- Critrulline, Arginine, uye alpha keytoglutarate.
Mesoswell-Cell Volumizing ATP Matrix: Chirongwa cheAATP chinowedzera creatine kupa mushandisi wemisipiresi inowanikwa uye vascularity. Panzvimbo pokungonzwa uchinetseka, unotarisa pumped zvakare. ATP ndiyo inyanzvi inokosha inopa simba kusero kuti ishandise sekutanga kweAATP. Maseowll-Cell Volumizing ATP matrixes inoumba DL- creatine malate, L-taurine, creatine nitrate, uye ascorbic acid.
Neuromprph-Neuro Yakagadzirisa Matrix Inokurudzira: Phase 3 inopa mushandisi kuwedzera kukurudzira uye simba. Caffeine ndiyo inotungamirira inokurudzira simba, kusvinura, uye kutarisa. Zvimwe zvinosanganisa zvinosanganisira Glucuronclactone, ethylxanthine anhydrous, uye DMAA (Geranaburn)!
Mutengo wakarurama seyomu 3 / 5 / 15 uye uri pasi pekuchinja